Vaovao Mafana · Jolay, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Jolay, 2012
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Jolay, 2012
Kiobà: Mafàna Fo Mpiaro Ny Zon'Olombelona Voadaroka, Voasambotry Ny Mpitandro Filaminana Tamin'ny Fandevenana An'i Payá
Amerika Latina 28 Jolay 2012
Ny 23 Jolay teo, nambaran'ireo mafàna fo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny haino aman-jery vahiny any Kiobà fa raha iny niverina avy nandevina an'i Oswaldo Pay, mpitarika ny Vinavinan'asa malaza Varela sady nahazo ny loka Skharove an'ny parlemanta eorôpeana ho an'ny fiarovana zon'olombelona sy ny demokrasia ry zareo, dia nisambotra olona eo ho eo amin'ny 50 ny polisim-pirenena kiobàna.. An'isan'ireo voasambotra ireo Guillermo Fariñas sy Antonio Rodiles.
Repoblika Demaokratikan'i Congo : Voampanga Any Avaratr'i Kivu i Rwanda
Afrika Mainty 26 Jolay 2012
Hatramin'ny volana Aprly, ny M23, ivondronan'ireo mpiady tranainy tao amin'ny mpihoko tutsi Kongoley avy amin'ny Congrès national pour la défense du peuple CNDP dia manakorontana ny faritany Avaratr'i Kivu any Atsinanan'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo. Ankoatry ny zavatra hafa dia takian'ireny miaramila ireny ny hanajàna ny fifanarahana tamin'ny 2009 izay, araka ny hevitr'izy ireo, dia tsy hajain'ny governemanta kongoley Mihevitra ny sasany fa tsy noho ny tsy fanajàna ireny fifanarahana ireny ihany no anton'ireny fitsoahana an-daharana ireny fa misy ihany koa finiavana hizarazara ny firenena. Mitohy miteraka fahafatesan'olona marobe sy fifindra-monina faoben'ny vahoka ny hetsika M23.
Madagasikara : Tsoa-kevitra Tamin'Ilay Fiokoana Farany Teo
Afrika Mainty 25 Jolay 2012
Tamin'ny Alahady 22 Jolay lasa teo, roa maty, 4 naratra nandritra ny fifandonana teo amin'ny miaramila tao amin'ny toby iray ao Ivato, Madagasikara, anisan'ny namoy ny ainy tamin'izany ny kaporaly Koto Mainty, mpiambina taloha an'ny minisitry ny fiarovana, Jeneraly Noël Rakotonandrasana. Tahaka ireo fifandonana efa nisy teo aloha, miseho ny...
Ejypta: Vaovao Mifamahofaho Momba Ireo Niharan-doza Tamin'ny Lozam-piaran-dalamby
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Jolay 2012
Somary mahatsikaiky sy tsy mazava ny vaovao mikasika ny isan’ireo namoy ny ainy sy naratra nandritra ny lozam-piaran-dalamby nitranga tao an-tanàna manodidina an’i Kairo androany maraina. Samihafa ny vaovao notaterin’ny fampahalalam-baovao mahazatra, nilaza izy fa nisy ny aina nafoy sy ny naratra – nilaza koa anefa izy fa tsy nisy ny aina nafoy ...
Espaina: Tsy Voasakana Ny Hetsika An-dalambe
Eoropa Andrefana 23 Jolay 2012
Hatramin'ny nahatongavan'ny mpihady tao Madrid, izay nitokony ho fanoherana ny fampihenana hatramin'ny 63% ny tetibolan'ny sehatr'asandry zareo, tsy nitsahatra ny fihetsiketsehana nataon-dry zareo tao an-drenivohitra Espaniola. Mizara ny sary izahay.
Azerbaijan: Mirehitra Ny Foibe Ara-Kolontsaina Heydar Aliyev
Azia Afovoany sy Kaokazy 20 Jolay 2012
Naharaisana tatitra ny hoe mirehitra ny Foibe ara-Kolotsaina Heydar Aliyev ao Baku, Azerbaijan. Ilay tranobe dia nosokafana tamin'ny May 2012 ary rafi-tranon'ilay mpanao maritrano metisy iraniana-britanika Zaha Hadid.
Ejipta: Tsy Mila Fandevenana Miaramila Ho An'i Omar Sulieman.
Maty i Omar Suleiman, praiminisitra lefitr'i Hosni Mubarak sady lehibe taloha tao amin'ny sampam-pitsikilovana tao Ejipta. Ny vaovao momba ny fahafatesany dia nitondra onjam-panehoan-kevitra maro teny anivon'ny tambajotra sosialin'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra.. Ao amin'ny Twitter, ny mponin'ny aterineto avy amin'ny tontlo Arabo dia tsy nahita loatra zava-toa mba hitomaniana ny fahalasanany.
Ejypta: Manoro Hevitra Ireo Syriana Ny Ejypsiana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Jolay 2012
Mizara toro-hevitra amin'ireo Syriana ny Ejypsiana -ao amin'ny Twitter. Amin'ny alalan'ny tenifototra manokana, sy torohevitra manomboka amin'ny hoe “aza maka sary miaraka amin'ny fiara mifono vy” ka hatramin'ny “mandraisa torohevitra avy amin’ olo-kafa.” Taorian'ny vaovao nitranga tao Damaskosy androany atoandro no anton'izany,vaovao mikasika ny nahafatesan'ireo mpikambana ambony telo ao amin'ny presidanza...
Syria: Lazain'ny Mpiserasera Ho Manomboka Ny Fiafaran'ny Fitondrana Bashar
Malaza ny Twitter mikasika ny fanombohan'ny fihongananan'ny fitondran'i Assad, taorian'ny fipoahana baomba tao Damaskosy izay nahafatesana olona telo mpikambana ambony ao amin'ny presidansan'i Bashar Al Assad. Arwa Damon avy ao amin'ny CNN nitatitra toy izao: @arwaCNN: nilaza ny tafika ao ‪#syria‬ fa fitaovana napetraka tao anatin'ny efi-pivoriana ilay zavatra nipoaka...